GV Face: Ny Zavatra Ilainao Fantarina Momba Ny Hetsi-panoherana Goavana “Maimbo Ianareo” Ao Libanona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Aogositra 2015 4:53 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Ελληνικά, русский, Français, Deutsch, Español, 日本語, English
Ny 22 sy 23 Aogositra, niatrika ny hetsi-panoherana goavana indrindra teo amin'ny tantarany tato ho ato i Beirut, olona 20.000 no nifamotoana hiteny tamin'ny governemanta hoe : “Maimbo ianareo.”
Ao anatin'ity fizaràn'ny GV Face ity i Faten Bushehri dia niresaka tamin'i Joey Ayoub, mpandray anjara ato amin'ny Global Voices ao Beirut izay niara-niasa akaiky tamin'ny kaomity mpikarakara ny ‘Maimbo ianareo’ na طلعت ريحتكم.
Nanomboka ny 17 Jolay ny olan'ny fako tao Libanona, refa nakaton'ny mponina ilay toerana midadasika indrindra fanariana fako tao an-tànanan'i Naameh. Io toerana fanariana fako io no niantoka ireo faritra tao Beirut sy ny Tendrombohitra Libanona — efa ho ny antsasaky ny mponina eo amin'ny firenena.
Niafara tamin'ny fisian'ireo fako nisavovona toy ny tendrombohitra kely ny tsy fahavitàn'ny governemanta mamaha ny olan'ny fako, nanery ireo vahoaka hidina an-dàlambe nanao tampin'orona.
Fitakiana vahaolana maharitra momba ny olan'ny fako no nentina nanomboka ny hetsika’ Maimbo Ianareo’, ary nitondra ny vahoaka ho eny an'arabe, saingy vetivety foana ny raharaha dia lasa lavitra noho ny resaka fako ka niresahana ireo olana goavana kokoa mifandraika amin'ny kolikoly ao anatin'ny governemanta ankehitriny.
Libanona izay efa miaritra ny fisianà fotodrafitrasa tsizarizary sy fahatapahan'ny herinaratra isanandro, dia tsy manana filoham-pirenena efa ho taona iray mahery. Tamin'ny 2009, nanalava ny fe-potoam-piasàny ho hatramin'ny 2017 ny parlemantany, tsy misy fifidianana, tamin'ny fitanisàna ny korontana ho antony.
Ity ny tsongo avy amin'ny zavatra nosoratan'i Joey roa herinandro lasa izay, talohan'ny nanombohan'ilay hetsi-panoherana nomena ny anarana hoe, “Afaka Miresaka Ny Fiovàn'ny Politika Momba Ny Fako Ao Libanona Ve?“
Nanam-bitana aho niaina tanaty Libanona tsy voaloton'izany tsy fahafahana manoatra izany. Niaina ny hafaliana ara-politika aho, fomba filaza voazavan‘ilay mpikaroka momba ny olombelona amin'ny lafiny rehetra, David Graeber, ho toy ny fiainana amim-pahatsapàna ho afaka manome dikany ny zavatra mitranga, amin'ny fahatratrarana ny tanjona iombonana — ny fahatsapàna fa matoky ny olona manodidina anao ianao satria samy natao hitady vahaolana amin'ny olana iraisana.Vao haingana izao, niainako izany tamin'ny fiarahako tamin'i طلعت ريحتكم (‘tol3et re7etkom’, midika hoe ‘Maimbo Ianao’), hetsi-bahoaka naorina ho setrin'ny tsy fahafahan'ny governemanta mamaha ny olan'ny fako.